Tag: War | Sagal Radio Services
Barlamaanka oo u yeeray wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka
Sagal Radio Services • News Report • July 25, 2013
Cabdikariin Xuseen Guleed Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa maalinimada Axada lagu wadaa inuu hortago Baarlamaanka Soomaaliya.
Golaha aamaanka oo dowlada Soomaaliya u ogolaatay in ay lasoo dagto qalab Milatiri
Sagal Radio Services • News Feature • July 25, 2013
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa looga hadlay warbixintii ay soo gudbiyeen Guddiga kormeerka Cunaqabateynta Saaran Soomaaliya iyo Eriteraya, hawlgalka AMISOM iyo Ciidamada Dowlada Soomaaliya.
Al-Shabaab"waxaan bisha Ramadaan fulinay 108 weerar"
Sagal Radio Services • First person • July 25, 2013
Xarakada Al-Shabaab ayaa ka warbixisay weeraro ay tan iyo bilowgii bisha Ramadaan ay ka geysteen magaalada Muqdisho iyo gobolada koofureed.
Putland oo magacaawday guddi ugu qeyb galaya shirka New deal ee Biljiim
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiraxman Maxamed Maxamuud Farole ayaa sheegay inay uga qaybgalayaan shirka New-Deal ee Brussels ka furmaya 16 Sep,2013 magaca Puntland . Hadalkan ayuu shaaciyay Dr.Farole ka dib kulan uu la qaatay wafdi heer sare ah oo ka socda Midowga Yurub uuna hogaaminayay Agaasimaha guud Afrika ee EU ...
Masar oo yeelatay Wasiiro Cusub iyo Ikhwaanul Muslimiin oo kacdoon wada
Sagal Radio Services • News Report • July 17, 2013
Masar oo yeelatay gole wasiiro cusub xilli wali ay mudaaharaadyo ku baaqayaan ururka Islaamiga ah ee Ikhwaanul Muslimiin.
Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya oo dhigiisa Itoobiya Adiss Ababa kula kulmay
Sagal Radio Services • News Feature • July 17, 2013
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo ay wehliyaan Saraakiil ka tirsan Milateriga Soomaaliya ayaa booqasho dhowr maalmood qaadaneysa uga bilaabatay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Midowga Yurub oo guul weyn ku tilmaamay shirka loo qabanayo Soomaaliya oo ka dhacaya Brussels
Sagal Radio Services • News Feature • July 16, 2013
Midowga Yurub ayaa maanta ka hadlay shir la qorsheynayo in looga hadlo dib u dhiska Soomaaliya,kaasi oo ka dhaci doona magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium.
Wasiirka Maaliyadda oo furay wada tashi ku aadan qorshaha New Deal.
Sagal Radio Services • News Report • July 16, 2013
Warsaxaafadeed ay wasaaradda Maaliyadda kasoo saaray qorshaha cusub ee New Deal.
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Oo Gaaray Itoobiya
Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Cabdi Xakiin Fiqi iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo ayaa u duulay wadanka Itoobiya.
Maamulka Somaliland oo dib u ogolaaday duulimaadyada Qaramada Midoobay
Sagal Radio Services • News Report • July 15, 2013
Soomaaliland oo ogolaatay in diyaaradaha gar-gaarka Qaramada Midoobay ay ka degaan goobaha ay maamusho.
Madaxweyne Faroole oo sheegay inuu joojiyey Doorashooyinkii Puntland (Warsaxaafadeed)
Sagal Radio Services • News Report • July 14, 2013
Warsaxaafadeed lagasoo saaray Madaxtooyada Putland ayaa lagu sheegay in la joojiyay doorashooyinkii dowladaha hoose ee Putland.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Oo Ka Warbixiyay Safarkii uu ku tagay Turkiga
Sagal Radio Services • First person • July 12, 2013
Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo safar ugu maqanaa Turkiga oo Muqdishu dib ugu soo laabtay..
Qarax Ismiidaamin ah oo Magaalada Muqdisho lagula beegsaday Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM
Sagal Radio Services • News Feature • July 12, 2013
Weerar Ismiidaamin ah ayaa goor dhow lala beegsday gaadiid ay wateen ciidamada AMISOM oo marayay agagaarka xarunta hay’adda UNDP ay ku leedahay Muqdisho, iyadoo weerarkaas ay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawa
Qaramada Midoobay oo qorsheyneysa in ay dib u soo celiso qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya ku nool
Sagal Radio Services • News Report • July 12, 2013
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhanka Qaxootiga ee UNHCR ayaa qorsheyneysa in ay dib dalkooda hooyo ugu soo celiso qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan xeryaha qaxootiga ee Gobolka Waqooyi bari ee dalka Kenya gaar ahaan kuwa ku jira xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Mareykanka oo diyaarado dagaal siinaya ciidmada Masar
Sagal Radio Services • News Report • July 11, 2013
Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in todobaadyada soo socda uu siinayo Masar diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano F16, xilli ay ka jiraan dalkaas qalalaase siyaasadeed sababay in la afgambiyo Maxamed Mursi.
Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay wafdi kasocda midowga Yurub
Sagal Radio Services • News Feature • July 11, 2013
Madaxweyne Xasan Shiikh oo wafdi ka socda Midowga Yurub kala hadlay arrimo xasaasi ah.
Dowladda Sierra Leone oo Bedeshay Taliyihii Ciidankooda ku sugan Soomaaliya
Sagal Radio Services • First person • July 11, 2013
Xukuumadda Sierra Leone oo ka mid ah dalalka ay ciidamada kaga sugan yihiin Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay bedeshay taliyihii ciidamadan ka tirsan howlagalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Madaxweyne Xasan Shiikh oo la kulmay jaaliyada Soomaaliyeed ee Konfurta Suudaan
Sagal Radio Services • News Report • July 9, 2013
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo ayaa xalay Kulan la qaatay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koofurta Suudaan, halkaas oo uu madaxweynahu ka jeediyey khudbad uu kula dardaarmay Jaaliyadda.
Madaxweynaha Putland oo eedeeyay Barlamanaaka Federaalka Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Feature • July 5, 2013
Maamulka Putalnd oo ka mid ah maamulada sida weyn saameynta ugu leh siyaasadda dalka ayaa ksoo horjeestay qodobo la xiriira dastuurka oo ay ansixiyeen barlamaanka.
Maamuulka Sh Axmed Madoobe oo sheegay in ay sii wadayaan dagaalada Kismaayo
Sagal Radio Services • News Report • July 5, 2013
Maamulka Jubaland garabka Axmed Madoobe ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalada ay kala jiraan kooxaha kasoo horjeeda oo uu tilmaamay maamulka in kooxahaasi ay u galeen Al Shabaab.
Wasiirka Maaliyadda oo beeniyay in lacago sharci darro ah lagala baxay Bangiga dhexe ee Soomaaliya
Sagal Radio Services • First person • July 5, 2013
Wasiirka Maaliyada ee dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay eedayntii uga timid Guddiga Kormeerka ee Qaramada Midoobay oo sheegay in dhaqaalaha Bangiga dhexe ee Soomaaliya si weyn loo musuq maasuqo.
Isku shaandheyn la filayo in lagu sameeyo golaha wasiirada Soomaaliya
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya inuu heer gabo gabo marayo Isku shaandheynta lagu sameynayo Golaha Wasiirada, kaasoo in muddo ah la hadal hayay, maraaxiil kala duwana soo maray, iyadoo iska shaandheyntan ay noqoneyso mid si buuxda u saameyneyso qaab dhismeedka Golaha Wasiirada.
Ra'iisul Wasaare Saacid oo sheegay qorshe lagu sugayo amaanka dalka kana hadlay arrinta Xasan Daahir
Sagal Radio Services • News Feature • July 4, 2013
Cabdi Faarax Shirdoon(Saacid") Ra'iisul wasaaraha Soomaliya oo kulan la qaatay maanta laamaha amaanka dalka ayaa ka hadlay qorsho cusub oo xukuumadda u diyaarisay sugidda amniga, isagoona ka hadlay arrinta Xasan Daahir Aweys
Madaxweyne Xasan Shiikh oo Warqadihii Aqoonsiga Safiirnimo ka guddoomay danjiraha Britain ee Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • July 2, 2013
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta waraaqihii aqoonsiga danjirenimo kala guddoomay danjiraha cusub ee Britain ay u soo magacowday Soomaaliya, Neil Wigan.
Wasiirka arimaha gudaha oo markii ugu horeysay ka hadlay qabashada Xasan Daahir
Sagal Radio Services • News Feature • July 2, 2013
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed ayaa markii u horeysay maanta ka hadlay xaalada Sheekh Xasan Dahir Aweys, isagoo xaqiijiyay in gacanta dowladda uu ku jiro, isla markaana uu nabad qabo.
Munaasabadda 1-da Luulyo oo laga xusay dalka iyo madaxda ugu sareysa dalka oo kasoo qeyb galay
Sagal Radio Services • News Feature • July 1, 2013
Munasabadda Kowada Luulyo ayaa si weyn looga xusay gudaha iyo dibadda dalka, iyadoona madaxda dowlada Federaalka ay goob joog ka ahaayeen xuska kowda Luulyo oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ciidamada Kenya oo iska fogeeyay inay ka qeyb qaateen dagalada Kismaayo
Sagal Radio Services • News Report • July 1, 2013
Dowladda Kenya ayaa iska fogeysay inay ka qeyb qaadatay dagaaladii ka dhacay Kismaayo, iyadoo beenisay inay xirtay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan Jubooyinka.
Madaxweynayaal ismagacaabay oo la sheegay in ciidmada Kenya kuxereen Kismaayo
Sagal Radio Services • News Report • June 30, 2013
Xaaladda magaalada Kismaayo ayaa degaan xiliigan kadib markii gacan ku heynta magaalada ay la wareegeen ciidamada daacada u ah Sh Axmed Madoobe.
Ra'iisul Wasaare Saacid oo sheegay inay fashiliyeen weeraro halis ahaa oo ay abaabulyeen Al Shabaab
Sagal Radio Services • News Feature • June 28, 2013
Xaalada amaan ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan goobaha muhiimka ah sida xarumaha Dowlada iyo Hey'adaha ayaa siweyn loo adkeeyay waxii ka dambeeyay weerarkii Al shabaab ay ku qaadeen xarunta UNDP ee Muqdisho.
Dowladaha Mareykanka iyo Ecuador oo hanjabaado adag isdhaafsaday....................
Sagal Radio Services • News Report • June 28, 2013
Dowlada Ecuador ayaa hadal caro leh uga jawaabtay hanjabaado uga yimid Maraykanka oo la xariirta magangelyada ay Ecuador siineyso ninka kasoo baxsaday Maraykanka ee Edward Snowden.
Axmed Godane oo lasheegay inuu dilay Hogaamiyashii kasoo horjeeday iyo Xiisad ka dhex aloosan Al Shabaab
Sagal Radio Services • News Report • June 27, 2013
Waxaa la xaqiijinayaa in Ciidamada Al Shabaab ay fuliyeen amar dil ah oo lagu fuliyey qaar kamid ah Hogaamiyayaashii ugu sareeyey ee lagu qabtay hawlgalkii dhawaan ka dhacay magaalada Baraawe ee gobalka Shabeelada Hoose.
Ciidamada AMISOM oo Qaraxyo lagula beegsaday Kismaayo iyo xiisad ka taagan magaalada
Gaari ay wateen ciidamada Sierra Leone ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa qaraxyo miino lagula eegtay maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, iyadoo ay jirto xiisad u dhexeysa dhinacyadii shalay ku dagaalamay magaaladaas.
Xassan Shiikh oo wafdi kasocda Norway kulan kula qaatay garoonka diyaaradaha Muqdisho
Sagal Radio Services • News Feature • June 27, 2013
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kula kulmay Wasiirka Horumarinta xiriirka caalamiga ah ee dalka Norway Heikki Holmes oo maanta booqasho ku yimid magaalada Muqdisho.
Ciidamada Sierra Leone oo sheegay inay qabteen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab
Ciidamada Sierra Leone oo dhowaan ku soo biiray howl galka AMISOM ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dagaalyahano ka tirsan Shabaab, kadib markii dagaal adag kula galeen deegaanka Taabta ee gobolka Jubada Hoose.
Xassan daahir Aweys oo lagu soo dhaweeyay Cadaado iyo Mas'uuliyiin ka tirsan dowlada oo gaaraya Ximin iyo Xeeb
Sagal Radio Services • News Report • June 26, 2013
War goor dhow na soo gaaray ayaa sheegaya in Sheekh Xasan Dahir Aweys oo ay galbinayaan kolonyo ciidan oo uu la socdo Madaxweynaha Maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa goor dhow gaaray degmada Cadaado.
Dagaal Culus oo ka qarxay magaalada Kismaayo iyo xaalada oo kacsan
Sagal Radio Services • News Feature • June 26, 2013
Dgaalo xoogaan oo anan waxba la'isula harin ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo iyadoona dhamaan dhaq-dhaqaaqyada dadweynaha ay xanibanyihiin.
Wasiirka Gaashaandhiga dowlada Soomaaliya oo booqay Baladweyne
Sagal Radio Services • News Feature • June 25, 2013
Dowlada Federaalka ayaa wado qorshayaal dagaal oo ka dhan Xarakada Al-Shabaab Iyadoona Safarka Wasiir Fiqi uu xoojinayo wararka AMISOM-ta Bladweyne ee ku aadan in ay weerari doonaan degaano ay ku suganyihiin Shabaab
Barlamaanka oo doonaya in qodobo muhiim ah ansixiyaan kahor fasaxooda
Sagal Radio Services • News Report • June 25, 2013
Barlamaanka Federaalka oo ka doodaya qodobo Muhiim ah kahor inta aysan galin fasax waqti badan qaadanaya.
Amrrika Qadar Shiikh Xamad oo wilkiisa xilka ku wareejiyay
Amiirka dalka Qatar Sheikh Xamad bin Khalifa Al Thani ayaa si rasmi ah u xilka ugu wareejiyey wiilkiisa Tamim Hamad Al Thani oo 33 jir ah
Putland oo ay kusoo badanayaan dhalinyrada Tahriib doonka ah iyo Barlamaanka oo ka hadlay
Sagal Radio Services • News Report • June 24, 2013
Putland oo ay kusoo badanayaa dadka tahriibta ah ee doonaya in ay gaaraan wadanka sacuudiga iyadoona dhibaato badan falalka tahriibta ay kasoo gaartay dhalinyaro nolol doon ah.
Dagaal beeleed ka dhacay gobolka Soomaalida Kenya iyo waan-waan soconaysa
Sagal Radio Services • News Feature • June 24, 2013
Qasaare xoogan oo ka dhashay dagaal beeleed ka dhacay gobolka Waqooyi Bari Kenya iyadoo saameyn xoogan ay dagaallada ku yeesheen isu-sucodka dadweynaha
AMISOM oo tababar ugu furtay Muqdisho saraakiil ka tirsan Booliiska Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • June 23, 2013
AMISOM ayaa dardar gelineysaa tababarada ay siineyso ciidamada Booliiska Soomaaliya si ay u sahlanaato suggida amniga dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho.
Dowlada Britain oo lacago badan ku bixineysa dib-udhiska Xabsiyada Dalka.
Sagal Radio Services • News Feature • June 23, 2013
Dowlada Ingiriiska ayaa xilligan aad u daneyneysa taageerada Soomaaliya iyadoona ay sidooakle marar badan qaar ka mid ah dowladaha caalamka ugu baaqday in lataageero Dowlada Federaalka.
Gudigii Ra’iisulwasaare Saacid u magacaabay Qaban-qaabada Munaasabadaha xorriyada dalka oo Kulmay
Sagal Radio Services • News Feature • June 22, 2013
Guddiga dowlada ay u xil saartay abaabulka munaasadaha 26-kuun iyo 1-da Luulyo oo Warsaxaafadeed soo saaray.
Wadamada Saxiibada Siiriya oo ku kulmaya Dooxa
Sagal Radio Services • News Report • June 22, 2013
Wasiirada Wadamada loogu yeero saaxiibada Siiriya ayaa waxaa uu kulan ugu furmay dalka Qadar.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo kulan la qaatey dhalinyarada
Sagal Radio Services • News Report • June 21, 2013
Prof, Maxamed Cisman Gudoomiyaha Barlamaanka Federaalka oo qaar ka mid ah dhalinyarada la kulmay kalana hadlay arrimo xasaasi ah.
Aamaanka Soomaaliya oo kalsooni darro lugaha lagalay iyo cabsida laga qabo Shabaab oo sii badatay
Caalamka oo indhaha wali lasii raacaya weerarkii lagu qaaday xarunta qaramada midoobay ee Muqdisho iyo Al Shabaab oo wali ay jirto awoodooda.
Dowlada Siiriya oo xoojineysa dagaalka ka dhanka ah mucaaradka
Sagal Radio Services • News Report • June 20, 2013
Maamulka Bishaar Al Asad ee ay sii wiiqmeyso awooda maamul ee dalkaasi oo dagaallo hor leh abaabulaya.
Saif al Islam oo maxkamad lasoo taagayo iyo ICC oo xukunkiisa dalbatay
Sagal Radio Services • News Feature • June 18, 2013
Dowlada Liibiya oo bilaabeysoa maxkamadeynta qaar ka mid ah hogaamiyaashii maamulkii Qadaafi.
Ra,iisul wasaaraha Soomaaliya oo Muqdisho ka furay shir looga hadlayo Waxbarashada
Sagal Radio Services • News Report • June 18, 2013
Warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo lagu faahfaahiyay shir looga hadalayo waxbarashada dalka.
Xubin iska casishay guddiga doorashooyinka Putalnd
Sagal Radio Services • News Report • June 17, 2013
Muran ka dhex bilowday guddiga doorashada Mamaulka Putalnd iyo maamulka oo aan wali ka hadalin
Xarakada Al-Shabaab oo soo bandhigtay Saraakiil Kenyan iyo Hub
Sagal Radio Services • News Feature • June 17, 2013
Xarakada Al shabaab ayaa sheegtay in ay qorsheyneyso dagaalo xoogan oo ka dhan ah ciidamada Kenya iyo kuwa dowlada ee ku sugan Jubbooyinka.
Ciidamo ka Tirsan XDS oo Maanta Tababar ugu soo Dhamaaday Xerada Jaziira
Sagal Radio Services • News Report • June 16, 2013
Dowlada Soomaaliya oo xooga saareysa tababarka ciidamo cusub.
Madaxweynaha Soomaaliya oo London kula Kulmay Ra’iisulwasaaraha Ingiriiska
Sagal Radio Services • News Report • June 15, 2013
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo arrimo xasaasi ah kala hadalay Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska David Cameron.
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Norway oo soo gaaray Muqdisho lana kula kulmay Ra'iisul Wasaare Saacid
Sagal Radio Services • News Feature • June 15, 2013
Wafdi Kasocda Norway oo soo gaaray magaalada Muqdisho, lana kulmay madaxda dowlada Federaalka.
Xildhibaano iyo Diplomaasiyiin ku sugan Kenya oo kawada hadalay arrimaha Jubooyinka
Sagal Radio Services • News Feature • June 14, 2013
Dowlada oo arimaha Jubooyinka kala hadashay wadamada caalamka si xal loo gaaro.
Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray London iyo kulamo uu halkaas kula qaadan doono wadamada G8
NPR Interview • News Feature • June 14, 2013
Madaxweynaha Somalia oo ka Qayb-galaya xafladda dhalashada Boqoradda Britain
Somaliland oo diiday in Xafiiska Howl galka QM ee UNSOM laga furo Hargeysa
Sagal Radio Services • News Report • June 14, 2013
Qaramada midoobay oo Somaliland kala hadashay xafiis ay ka furato Hargeysa.
Taliyaha Booliiskaoo ka hadlay Qorshe Cusub Oo Wax Looga Qabanayo Ammaanka
Booliiska Soomaaliya oo sheegay in isabadal muuqada ay ku sameyn doonaan amaanka dalka.
Lix qof oo lagu dilay magaalada Mandhera ee Kenya
Sagal Radio Services • News Feature • June 13, 2013
Wararka la helayo ayaa sheega in kooxo hubeysan ay weerar ugu geysteen duleedka degamada mandhera gaari waday arday iyo dad rayid ah
Kenya oo sheegtay in uu ka baxsaday nin ku eedeysan argagixiso
Sagal Radio Services • News Report • June 13, 2013
Dowlada Kenya ayaa sheegtay in muwaadin Kenyaan ah oo dowlada ugu jiray liiska argigixsada uu baxsaday kuna biiray kooxada Alqaacida ee Shabaab.
Dowlada oo sagootisay safiirka UK u qaabilsanaa Soomaaliya
Warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya oo lagu sagootiyay Safiirkii dowlada Ingiriiska ufadhiyay Soomaaliya oo xilligiisii uu dhamaaday
Xafiika Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo hindise sharciyeed u gudbiyay Baarlamaanka.
Sagal Radio Services • News Report • June 12, 2013
Barlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa uu maalmahan siweyn ugu mashquulsanyahay ansixinta qorshayaal dhowr ah oo ku adaan arrimaha maamulka u sameynta dalka
Buug ka hadlaya marxaladaha Islaamiyiinta Soomaaliya oo Nairobi lagu soo bandhigay
Sagal Radio Services • News Report • June 11, 2013
Kulan ay kasoo qeyb galeen Aqoonyahano, Culumo iyo qeybaha kale ee bulshada kana dhacay Magaalada Nairobi ayaa lagu soo bandhigay buug ka hadalaya Kobicii Islaamiyiinta Soomaaliya.
Mudaaharaadyada looga soo horjeedo dilalka Soomaalida Konfur Afrika oo sii socda
Dadka Soomaaliyeed oo wali wada mudaaharaadyada looga soo horjeedo dilalka lagu hayo Soomaalida Konfur Afrika.
Ra’iisul wasaare Saacid “Wada hadal ayaan ku dhameyneynaa dagaalada Kismaayo”
Dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay in isfahan iyo wada-hadal ay ku dhameyn doonto muranada siyaasadeed ee ka jira gobollada Jubbooyinka.
Axmed Madoobe oo shir jaraa’id kaga hadlay dagaalada Kismaayo iyo kulan uu la qaatay Xasan Shiikh Maxamuud
Sagal Radio Services • Commentary/News Report • June 8, 2013
Axmed Madoobe ayaa ku eedeyay dowlada dagaalada Kismaayo, xilli uu muranka u dhaxeeyo qabiilo Soomaaliyeed oo walaalo ah
Kulan looga tashanayay aas-aaska jaaliyad ay yeelato Soomaalida Kenya oo Nairobi ka dhacay
Sagal Radio Services • News Report • June 8, 2013
Soomaalida degan kana ganacsada Kenya oo abaabulaya aas-aaska jaaliyad ay yeeshaan.
Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada Kismaayo
Shacabka ku nool Kismaayo oo cabsho xoogan ka muujiyay dagaalada,xilli dowlada Soomaaliya ay ku baaqday in lajoojiyo dagaalada.
Kooxo hubeysan oo dekadda Bosaaso ka afduubtay doon xoolo waday
Sagal Radio Services • News Report • June 6, 2013
Warar lahelayo ayaa sheegaya in kooxo hubeysan oo loo maleynayo in ay yihiin Burcad badeed ay afduubteen dooni sida xoolo nool oo ka amba baxday magaalada Bosaaso.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • June 2, 2013
Dhageystayaasheenna qiimeynta mudan, warka idaacadda Sagal waxa uu toddobaadkan idin kaga imaanaya xarrunta Radio Sagal ee magaalada Nayroobi.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • June 1, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • May 26, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • May 25, 2013
Madaxda Dalalka IGAD oo isku raacay in Muqdisho lagu qabto shir Maamul KMG ah loogu dhisayo Jubbooyinka (SAWIRRO)
Sagal Radio Services • News Report • May 25, 2013
Madaxda dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD oo shir socday illaa xalay ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa isku raaceen in dowladda Soomaaliya ay Muqdisho ku qabato shir maamul KMG ah loogu sameynayo gobollada Jubbooyinka.
Sagal Radio Services • News Report • May 19, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • May 18, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • May 11, 2013
Dhageystayaasheenna qiimaha mudan, warka idaacadda Sagal waxa uu toddobaadkan idin kaga imaanaya xarrunta Radio Sagal ee magaalada Nayroobi.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • May 5, 2013
Ciidamo ka tirsan dowladda oo la wareegey qeybo ka mid ah Bakool
Sagal Radio Services • News Report • May 4, 2013
Maamulka dowladda Soomaaliya ee gobolka Bakool ayaa sheegay inay Al-shabaab kala wareegeen degmada Tiyeegloow oo 90-km u jirta degmada Xudur ee gobolka Bakool iyo deegaan ku dhow Xudur oo lagu magacaabo Mooro-gaabeey, kaddib dagaal saacado socday oo xalay ka dhacay deegaannadaas.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • April 28, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Feature • April 27, 2013
Dhageyso Warka Radio Sagal
Sagal Radio Services • News Report • April 21, 2013
Sagal Radio Services • News Report • April 20, 2013
Wasiirka xanaanada xoolaha ee Somaliland oo sheegay in shaqaaqad dhawaan ka dhacday Togdheer xal laga gaarya
Sagal Radio Services • News Report • April 16, 2013
Wasiirka xanaanada xoolaha ee Somaliland Md. Cabdi Aw-daahir, ayaa sheegay in shaqaaqo dhawaantan ka dhacday meel u dhow magaalada Burco laga gaaray heshiis is fahan ah, kadib markii laga wada hadlay wixi keenay shaqaaqadaasi.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • April 14, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • April 13, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • April 7, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • April 6, 2013
Jamhuurriyadda Jabuuti oo gaadiid ciidan ugu deeqday Soomaaliya (Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • April 4, 2013
Dowladda federaalka Soomaaliya waxay maanta caawimaad hub ka heshay dalka Jabuuti kaddib markii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu khafiifiyay xayiraadda hubka ee saaran Soomaaliya.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • March 31, 2013
Dhageyso warka idaacadda Sagal iyo barnaamijkii dhacdooyinkii tagay ee toddobaadka
Sagal Radio Services • News Report • March 30, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • March 24, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • March 23, 2013
AMISOM oo cambaareysay qaraxii shalay ee Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • March 19, 2013
Howl galka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM, ayaa cambaareeyay weerarkii is qarxinta ahaa ee shalay Muqdisho ka dhacay, kaas oo ay ku dhinteen inta la ogaadey 8 ruux, ayna ku dhaawacmeen tiro kale.
Dhageyso Warka Idaacadda Sagal
Sagal Radio Services • Audio/News Report • March 17, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • March 16, 2013
Audio/News Report • March 10, 2013
Dhageyso warka idaacadda Sagal iyo Barnaamijkii Dhacdooyinka
Sagal Radio Services • Audio/News Report • March 9, 2013
Wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka madaxtinnimo ee Kenya
Sagal Radio Services • News Report • March 5, 2013
Waxa soconaya wali cododkii la dhiibtay doorashooyinka madaxtinnimada dalka Kenya, iyadoo uu hoggaaminaayo illaa iyo hadda codadkii la xisaabiyay musharraxa xisbiga TNA ee Uhuru Kenyatta, oo ku dhawaad hal milyan oo cod ka sareeya musharaxa xisbiga ODM ahna raysal wasaraha Kenya Raila Odinga uu isna qofka labaad yahay.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • March 3, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • March 2, 2013
Galmudug iyo Puntland oo si wada jir ah u cambaareeyay weerar lagu qaaday maqaayad ku taalla koonfurta Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • February 25, 2013
Maamulada Galmudug iyo Puntland ee gobolka Mudug, ayaa si isku mid ah u cambaareeyay weerar saaka kooxo hubeysan ay ku qaadeen maqaayad lagu shaaho oo ku taalla koonfurta Gaalkacyo, halkaas oo seddex ruux ay ku dhaawacmeen.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • February 24, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • February 23, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • February 17, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • February 16, 2013
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Cambaareeyay dilkii Sheekh C/qaadir Gacmeey
Sagal Radio Services • News Report • February 16, 2013
War Qoraalka ah oo ka soo baxay xafiiska Madaxdweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa tacsi loogu diray Eheladii iyo Ummadda Soomaaliyeed dilkii magaalada Garoowe loogu Geystay Sheekh C/qaadir Nuur Faarax kaas oo shalay casirkii nin hubeysani uu ku dilay masaajid ku yaala magaaladaasi.
Dhageyso warka Axadnimo ee Radio Sagal
Sagal Radio Services • Audio/News Report • February 10, 2013
Shir looga hadlayay sameynta sharuucda warbaahinta iyo isgaarsiinta dalka oo Muqdisho lagu qabtay
Sagal Radio Services • News Report • February 9, 2013
Wasaarada warfaaafinta xukumada Soomaaliya oo maanta kulan ay soo qaban qaabisay laaga hadlay sida loo hormarin karo Isgaarsiinta iyo Warbaahinta ayaa lagu qabtay Muqdisho.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • February 3, 2013
Dhageyso warka Radio Sagal iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobbaadkii tagay ee Soomaaliya
Sagal Radio Services • Audio/News Report • February 2, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • January 27, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • January 26, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • January 20, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • January 19, 2013
Mareykanka oo si rasmi ah u aqoonsaday dowladda Soomaaliya (Daawo)
Sagal Radio Services • News Report • January 18, 2013
Dowladda Mareykanka, ayaa si rasmi ah u aqoonsatay dowladda Soomaaliya tan iyo bur burkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991-kii ka dib.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • January 13, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • January 12, 2013
Sagal Radio Services • Audio/News Report • December 30, 2012
Dhageystayaasheenna qaayaha lahow, warka idaacadda Sagal waxa uu toddobaadkan idin kaga imaanaya xarrunta Radio Sagal ee magaalada Nayroobi.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • December 29, 2012
Dhageystayaasheenna qaayaha lahow, warka idaacadda Sagal iyo barnaamijkii dhacdooyinka waxa uu toddobaadkan idin kaga imaanaya xarrunta Radio Sagal ee magaalada Nayroobi.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • December 23, 2012
Nin hubeysan oo afar ruux ku dhaawacay Caabud-waaq
Sagal Radio Services • News Report • December 23, 2012
Nin hubeysan, ayaa magaalada Caabud-waaq ku dhaawacay afar oo rayid ah, kadib markii uu rasaas ku furay dad ku ganacsanaayay suuq ku yaalla magaalada Caabud-waaq.
Dhageyso warka Sabtinimo ee Sagal Radio iyo barnaamijkii dhacdooyinkii toddobaadkii tagay ee Soomaaliya
Sagal Radio Services • Audio/News Report • December 22, 2012
Dhageystayaasheena qaayaha lahow, warka waxa uu toddobaadkan idin kaga imaanaya xarrunta idaacadda Sagal ee Nayroobi, Kiinya.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • December 16, 2012
Dhageysatayaasheenna sharafta mudanow, warka waxa uu toddobaadkan idin kaga imaanaya xarrunta idaacadda Sagal ee magaalada Nayroobi, Kiinya.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • December 9, 2012
Dhageystayaasheenna qiimaha lahow, warka Idaacadda Sagal, waxa uu maanta idin kaga imaanayaa xarrunta idaacadda ee magaalada Nayroobi, Kiinya.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • December 8, 2012
Dhageystayaasheenna sharafta lahow, waxaa uu toddobaadkan idin kaga imaanaya warka Radio Sagal studiyaha Radio Sagal ee magaalada Nairobi.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • December 2, 2012
Dhageystayaasheenna qaayaha lahow, warka Idaacadda Sagal waxa uu toddobaadkan idin kaga imaanaaya xarrunta idaacadda Sagal ay ku leedahay magaalada Nayroobi ee dalka Kiinya.
Dhageyso warka Sagal Radiyo iyo Barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadkii tagay ee Soomaaliya
Sagal Radio Services • Audio/News Report • December 1, 2012
Dhageystayaasheenna qaayaha lahow, warka iyo barnaamijkuba waxa uu toddobaadkan idin kaga imaanayaa xarrunta idaacadda Sagal ee magaalada Nayroobi.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • November 25, 2012
Dhagaystayaasheenna qaayaha mudan, warka Sagal Radio, waxa uu toddobaadkan idin kaga imaanaya Istuudiyaha Reediyo Sagal ee magaalada Nayroobi.
Sagal Radio Services • Audio/News Feature • November 18, 2012
Kulanti wanagsan dhageystayaal meel kaste oo aad joogtaan, Warka Radio Sagal waxa uu maanta idin kaga imaanaya Istuudiyaha Radio Sagal ee magaalada Nayroobi ee dalka Kenya.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • November 17, 2012
Dhageystayasheenna qaayaha mudan, warka Radio Sagal toddobaadkan waxa uu idin kaga imaanaya Studiyaha Radio Sagal ee magaalada Nairobi.
Madaxtooyada Villa Soomaaliya oo beenisay warbixin Reuters ay qortay
Sagal Radio Services • News Report • November 16, 2012
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iska fogeeyay waribxin ay daabacday wakaaladda wararka ee Reutes, taasoo lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ogolaaday in la dhoofiyo dhuxusha taalla Kismaayo.
Raysal wasaare Saacid "Mudnaanteydu waa xurreynta dalka iyo sugidda amniga"
Sagal Radio Services • News Report • November 11, 2012
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Faarax Shir-doon (Saacid) ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay muhiimadda koowaad siin doonto dib u xoreynta dalka iyo sugidda ammaanka, wuxuuna intaas ku daray inay ka go'an tahay in dhammaan howlaha horyaalla ay ku dhameystiraan muddada ay haystaan.
Sagal Radio Services • Audio/News Report • November 10, 2012
Dhageysatayaasheenna qaayaha lahow, warka iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxa uu maanta idin kaga imaanayaa Istuudiyaha Idaacadda Sagal ee magaalada Nayroobi.
Warka Radio Sagal
Sagal Radio Services • Audio/News Report • October 27, 2012
Dhageystayaasha qaayaha lahow, warka Radio Sagal iyo barnaamijka dhacdooyinkii toddobaadkii tagay ee Soomaaliya, waxa uu maanta idin kaga imaan doonaa Studiyaha radio Sagal ee magaalada Naiorbi.